orinasa sy famatsiam-bola | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Howitzer "Hyacinth". Cannon "Hyacinth-B": toetra sy sary teknika
Tokony ho tamin'ny taona 50-60 tamin'ny taon-jato farany teo dia saika nijanona ny fampiroboroboana ny basy nentim-paharazana tany USSR. Tamin'izany fotoana izany, ny hevitra manjaka ao amin'ny fotopampianarana miaramila dia ny fametrahana ny balafomanga amin'ny ho avy. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny mpamorona ...
Ahoana ny fomba hanokafana orinasa mivarotra. Fitaovana ilaina amin'ny fivarotana entana
Vending - avy amin'ny anglisy. "Vending" izay midika hoe "fivarotana antsinjarany ny entana sy serivisy isan-karazany amin'ny alàlan'ny milina fivarotana." Ny diksionera ara-toekarena dia manome heviny mitovy amin'izany. Masinina mivarotra varotra Mivarotra mampiasa fitaovana ho an'ny orinasam-pivarotana varotra azo atao ...
Ny fitantanana tena dia ... Fitsipika, fotony, fiasa, fomba fitantanana tena. Fitantanana tena samirery
Ny fitantanana tena dia iray amin'ireo fepetra lehibe indrindra hahatratrarana fahombiazana. Amin'ny alàlan'ny fianarana ny fomba fitantanana araka ny tokony ho izy ny fotoanao dia ho afaka hiasa tsara kokoa ianao hahatratra ny tanjonao. Ny famaritana ny fitantanana tena Rehefa nanontaniana hoe inona ...
Kornet dia rafitra balafomanga miady amin'ny tanky. ATGM "Kornet-EM". ATGM "Kornet-E"
Hatramin'ny Ady lehibe voalohany, dia nanjary aretin'andoha tokoa ireo fiara mifono vy. Tamin'ny voalohany, na dia nanana fitaovam-piadiana voalohany aza izy ireo dia tsy namela ho an'ireo mpiady. Fa na dia nandritra ny Ady lehibe faharoa aza, ...
IP Televiziona - Televiziona nomerika manaraka
IPTV angamba no fomba mety indrindra sy moderina hijerena fahitalavitra. Tsy toy ny karazany mahazatra amin'ny fahitalavitra nomerika (tariby, satelita ary terestrialy), IP-TV dia serivisy ifandraisana feno. IPTV dia an'ny tsirairay, ...
Ny fanombanana ny raharaham-barotra. Fomba sy foto-kevitra momba ny vinavinan'ny orinasa
Ny famakafakana ny fanombanana ny asa aman-draharaha dia misy dingana iray mavesatra izay manampy ny tompony hamaritra ny lanjan'ilay orinasa, orinasa iray na orinasa iray. Mety takiana amin'ny toe-javatra samihafa izany. Ny fanombanana ny sandan'ny tsena amin'ny orinasa dia ...
Inona no napalm? Ny fampiasana sy ny famoronana napalm
Betsaka ny olona sovietika no nahalala momba ny napalm tamin'ny taona enimpolo taona lasa teo, nijery ny tatitra amin'ny fahitalavitra avy any Vietnam izay niady. Fandoroana mahatsiravina, zaza naratra ary maty, tanàna sy tanàna kely may ...
Ahoana ny fandoavana ny hetra amin'ny fitaterana amin'ny alàlan'ny "Gosuslugi"? Mandoa hetra an-tserasera, amin'ny alàlan'ny banky
Ahoana ny fandoavana ny hetra amin'ny fitaterana amin'ny alàlan'ny "Gosuslugi"? Raha ny marina dia manahirana olom-pirenena maoderina maro ity olana ity. Rehefa dinihina tokoa, ny olona iray dia tsy te-hijoro eo amin'ny banky mandritra ny fotoana maharitra mba handaminana ny kaonty amin'ny fanjakana. Indraindray ...
Inona no antontan-taratasy hamoahana ny fanaterana ny fananana raikitra
Ny tokony hijerena tsara ny fananana voaray, ary avy eo ny komisiona ny fananana raikitra dia noho ny lalàna momba ny hetra. Ny fomba fanao farany dia horesahina ao amin'ny lahatsoratra. Marihina fa ny ...
Inona no atao hoe famatsiam-bola fisotroan-dronono? Fitaovana lehibe sy fitsipika miasa
Indrisy, eto amin'ity tontolo mety maty ity dia misy dingana maro izay mbola tsy iharan'ny olombelona. Ary ny iray amin'izy ireo dia ny fahanterana. Mba hanamaivanana ireo fahasahiranana miseho, vitsivitsy dia vitsy no noforonina ...
Ny fampindramambola dia fiarovana voasoratra anarana, izay navoaka tao anatin'ny fifanarahana
Ny fampindramam-bola arahin'antoka dia miavaka amin'ny fisian'ny fiantohana amin'ny endrika trano sy tany. Ity karazana raharaham-barotra ity dia mitaky fanamafisana ofisialy amin'ny alàlan'ny antontan-taratasy manokana, satria ny fampindramam-bola amin'ny trano dia trano mitentina be ...
Ny indram-bolan'ny mpanjifa dia ... tahan'ny zana-bola amin'ny indram-bolan'ny mpanjifa ao Sberbank
Nanjary ampahany amin'ny fiainan'ireo mpiray tanindrazana amintsika ny fampindramam-bola ho fotoana ahafahana mandray vola haingana ho an'ny zavatra ilainy. Noho io serivisy io dia tsy mila mindrana amin'ny namany ny olona iray na amin'ny maro ...
Ahoana ny famenoana kitapo Qiwi amin'ny alàlan'ny terminal: fomba tsotra vitsivitsy
Ity rafitra fandoavam-bola ity dia mora kokoa miasa noho ny hafa rehetra. Amboary ny kaontinao, esory ny vola, aloavy amin'ny Internet ny entana na serivisy, onitra na findramam-bola amin'ny alàlan'ny kitapom-bola elektronika QIWI ...
Philip Kotler: Marketing, fitantanana
Ity anarana sy anarana ity - Philip Kotler - dia milaza kely amin'ny besinimaro. Tsy mpilalao horonantsary malaza io, fa tsy mpanolotra fahitalavitra, ny antsipirian'ny fiainany manokana fantatry ny olona mifosa amin'ny vavahady. Kotler ...
Fomba ifantohana amin'ny mpanjifa: tanjon'ny tanjona sy fampiofanana
Efa naheno momba seminera sy fiofanana mifantoka amin'ny fomba mifantoka amin'ny mpanjifa ve ianao? Andao hojerentsika hoe inona ireo hetsika ireo ary inona no mety mahasoa azy ireo ho anao na ...
Fivarotana Video-shoper.ru: famerenan'ny mpanjifa sy mpiasa
Inona no mety hahafinaritra kokoa noho ny mividy fitaovana vaovao, indrindra raha ilay "zava-baovao" no tena tadiavinao, amin'ny vidiny mirary ary aterina amin'ny tranonao amin'ny alàlan'ny mpandefa iraka mitsiky? Fa efa manana ny ...
Potato Sante: famaritana isan-karazany
Ny lakilen'ny fijinjana ovy avo lenta sy avo lenta dia tsy ny faharetan'ny fotoana sy ny fahaizan'ny hetsika fambolena ihany, fa ny safidin'ny karazany ihany koa. Raha ny tsiro sy ny toetra mampiavaka ny vokatra, dia mandresy miharihary amin'ny fiavian'ireo hafa ...
"Ball" - rafitra fitifirana balafomanga
Ny andraikitra hiantohana ny fiarovana ny sisintany an-dranomasina dia mifandraika amin'ny fanjakana rehetra misy morontsiraka mitatra. Izay firenena mitady politika ivelany mahaleo tena dia mety hatahotra ny hanafika ny tontolo politika sarotra ankehitriny. Ho an'ny Federasiona Rosiana, ...
Ny dingana voalohany amin'ny varotra
Ny mpivarotra rehetra dia miezaka mampitombo ny varony. Ity fomba ity dia zavakanto tena izy, fahalalana ny fitsipika ifotony izay azo antoka fa hitarika amin'ny fahombiazana. Ny dingana lehibe amin'ny varotra, izay mitovy amin'ny fifanakalozana lehibe ...
Casino "Faraona": hevitra sy hevitr'ireo mpilalao. Azo atao ve ny mandresy ny casino an'ny Faraona?
Ny filokana an-tserasera "Faraona" dia fialamboly sy fialamboly. Ho an'ny olona maro eran'izao tontolo izao, ny lalao casino an-tserasera dia nanjary endrika fialamboly malaza indrindra. Ny casino an-tserasera "Faraona" "Faraona" dia manome ny mpitsidika ny fepetra tsara indrindra ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 180 Next Page
56 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 3,084.